“Qaraxyadii Anigu La Kori Maayo Al-Shabaab iyo Mbeghati Midna Ee Xukunku Inaguu ina Hayaa”… Guddoomiyaha Golaha Guurtida Mudane Saleebaan M. Aadan | Somaliland.Org
November 27, 2008	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa sheegay in weeraradii Argagixiso ee 29 Oct lala beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada Hargeysa ay fuliyeen dad u dhashay Somaliland, isla markaana aanu u nisbayn karin kuwo dibadda laga soo maleegay. Waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay sidii loo samayn lahaa Shuruuc la xidhiidha ka hortega Argagixisada. “Hawsha diiwaangelinta ee gobolka Hargeysa u bilaabmay bisha kowdeeda iyo guud ahaan dalka oo dhan, laba gobolna laga soo hirgeliyay waad ogtihiin. Nabadgelyada welwel gaar ah baa naga haya Guurti ahaan, waxaananu u aragnaa inay waajib nagu tahay in aanu laban-laabno qaybtii aanu horeba ugu lahayn. Sidaa awgeed, qolada Komishanka doorashooyinka horaanu isu aragnay, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Badhasaabka iyo Golaha Deegaankana sidaas baanu maanta ugu yeedhnay.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Guurtida oo warbaahintu wax ka waydiisay kulan uu shalay xafiiskiisa kula yeeshay Wasiiru-dawlaha Arrimaha Gudaha Xasan Axmed Ducaale, Badhasaabka gobolka Hargeysa Cali Xasan Maxamuud (Asad) iyo Maayar Ku-xigeenka caasimada Hargeysa Maxamed Cabdilaahi Uurcadde. Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha adkaynta amaanka iyo hawsha diiwaangelinta Codbixiyeyaasha oo wejigeeda labaad horaanta bisha soo socda uu ka bilaabmi doono gobolka Hargeysa. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in hadba hanaanka ay u qabsoonto hawsha diiwaangelinta gobolka Hargeysa ay muujisayso guusha iyo guul-daradeeda, isla markaana waxa uu shacbiga ku dhaqan caasimada iyo guud ahaan gobolka ugu baaqay inay si wadajir, degenaansho iyo taxadir ku jiro u galaan. “Waxaanu u arkaynaa baaxadda Hargeysa leedahay iyo umaddii oo dhan oo isugu wada timi, haddana gudaheedii ka wada tartamaysa, sanad doorasho oo tartan asxaabta dhexdeeda ah baa iman kara iyo dhibaatadii inagu dhacday 29/10/08, markaanu arrimahaa isugeynay, waxaanu u aragnay inay waajib inagu tahay in dedaal, taxadir dheeraad ah iyo degenaasho siyaado ah la sameeyo. Anagu horta kolay ilaalinta Nabadgelyada ayaanu u arkaynaa,” ayuu yidhi Saleebaan-gaal. Wuxuuna intaa ku daray oo uu yidhi, “Diiwaangelinteenaa aynu degenaansho iyo xilkasnimo ku gudano.”
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in qaraxyadii Argagixiso ee lagu soo huguumay Hargeysa ay shacabka Somaliland cabsi ku abuureen, balse loo baahan yahay in laga baxo yoolyoolka ay arrintaasi dadweynaha gelisay. “Waxaanu umadda u sheegaynaa, waxaad moodaa inuu baqe iyo yoolyool inagu jiro’e, waar aan baqaha iska reebo, nin la tolay talo u taalaaye,” ayuu yidhi.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa uu tilmaamay in gacan-ku-haynta amaanku haatan ka fiican yahay qaraxyadii ka hor sidii uu ahaa, isla markaana loo baahan yahay sidii ilaalintiisa meel looga soo wada jeedsan lahaa. “Anigu waxaan qabaa; dadweynow Nabadgelyadu maalintay inagu dhacday (dhacdadii argagixiso ee 29 Oct), maantay ka sugan tahay. Waayo, maanta waynu u soo jeednaa, meelihii aynu arkaynayna waynu gufaynay.” Sidaa ayuu yidhi yidhi Guddoomiyuhu.
Mar wax laga waydiiyay sida uu u arko qaabka ay xukuumaddu uga hawlgashay iyo xidhitaanka waddooyinka hawlbawlaha ah qaarkood, waxa uu si kooban u yidhi; “Way furmi doonaan (waddooyinku).”
Guddoomiyaha oo la waydiiyay in derajada afraad ee Qaramada Midoobay heerka Nabadgelyada Somaliland ku riixay ay sabab u tahay sida ay xukuumaddu uga hawlgashay weeraradii Argagixiso ee 29 Oct lala beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaala caasimadda Hargeysa, sidaa darteedna aynu sababteeda leenahay, waxa uu ku jawaabay, “Waar mayee waxba isku maynaan qorin, xukuumaddana hawsha aynu u diranay ma yara, arrintana (qaraxyadii dhacay) dad inaga ah uun baa ku lug leh. Markaa waa in aynu diyaarsanaa shuruucdii aynu Argagixisada kaga hortegi lahayn. Sharciga diyaarintiisu ma hawl yara oo maalin, laba iyo todobaad toona ma qaato.”
Guddoomiyaha oo la waydiiyay inuu sii iftiimiyo waxa uu uga jeedo inay dad dalka u dhashay ku lug leeyihiin, waxa uu sheegay in aan meel kale naylagaga soo duullin. “Haddaa ma dad kalaa inagu soo duullay.? Waa laga yaabaa ra’yiga in lala wadaagayay. Anigu waxaan u arkayaa waxan is qarxinayaa inay inaga (Somaliland) yihiin. Laakiin, sidaynu dadkeenaa cudurku galay uga dawayn lahayn inagay inoo taalaa. Anigu la kori maayo Al-Shabaab, dawladdaa Mbeghati-na (dawladda Kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya) la kori maayo, meel kalena la kori maayo, xukunkuna inaguu (Somaliland) ina hayaa,” ayuu yidhi Saleebaan Maxamuud Aadan.